Kireystayaasha Magaalooyinka Mataanaha ah waxay wajahaan suuq halkaas oo kaliya 27% ee jagooyinka banaan ee la xayeysiiyay ay yihiin kuwo la awoodi karo 60% dakhliga gudaha ee aagga. Iyada oo la adeegsanayo falanqaynta suuqa gaarka loo leeyahay iyo macluumaadka guriyeynta la awoodi karo, ugu dambeeyay Qiyaasaha Guryaha MN warbixin la soo saaray sannad kasta iyada oo la kaashanayo Mu'asasada 'McKnight Foundation iyo HousingLink' waxay muujinaysaa hoos u dhac cusub oo awoodiisa ah gobolka iyo gobolka.
Sanadkii la soo dhaafay gudiga MN ee howlaha guriyaynta ayaa soo saaray warbixin dhameystiran oo soo saartay madal lix ah iyo 30 talo si wax looga qabto dhibaatada sii kordheysa. Sanadka 2019 Gudoomiyaha wuxuu soosaaray miisaaniyad ay kujirto maalgashiga ugu balaaran ee guryeynta taariikhda gobolka. Si kastaba ha noqotee, taageerada laba-geesoodka ah ma ahayn mid soo socota, waxaana la meel-mariyey miisaaniyad ku-meel-gaar ah oo aan u dhigmin waqtigan taariikhiga ah si loo joogteeyo awood u yeelashada guryaha.
Waxaa jira astaamo muujinaya wacyiga dadweynaha iyo rabitaanka wax ka qabashada waqtigan taariikhiga ah ee la dhisayo. Hoggaaminta ganacsiga ee hay'adaha sida Mashruuca Itasca, Rugta Ganacsiga ee gobolka oo dhan, iyo shirkadaha shaqsiyaadka ku baaqaya guryaha xoogsatada ayaa koraya. Awoodda guryeynta ee gobolkayagu wuxuu faa iido muhiim ah u leeyahay tartanka ganacsiga, soo jiidashada kartida, iyo tayada nolosha oo la bogaadiyay. Isbeddellada lagu muujiyay warbixintan ayaa muujinaya in faa'iidadan tartanku ay khatar ku jirto, hase yeeshe. Warbixinta ayaa heshay:
In kasta oo sawirku xoogaa wanaagsan uga muuqdo meel ka baxsan Twin Cities (58% dhammaan jagooyinka bannaan ayaa la awoodi karaa), Rochester wuxuu u taagan yahay inuu yahay midka ugu adag ee metrooga ugu weyn ee Minnesota ee loogu talagalay kireystayaasha mustaqbalka, oo leh 35% oo ka mid ah dhammaan liisaska ka soo baxa heerarka warbixinta ee kartida (bogga 4) .
Helitaanka iyo adeegsiga foojarrada xulashada guryaha ee gobolka ayaa hoos u dhacay sababta oo ah suuqa guryuhu cidhiidhiga yahay iyo raalli ahaanta ay milkiileyaashu u qabaan inay aqbalaan foojarrada suuqa gurigan adag. Kordhinta helitaanka foojarka si loogu caawiyo qoysaska sidii ay u ilaalin lahaayeen xasilloonida guryuhu waa mid taagan, iyadoo tirada firfircoon ee foojarrada loo adeegsado Magaalooyinka Mataanaha ah ay dhab ahaan kayar tahay sidii ay ahayd laba sano ka hor (bogga 8).
Iyada oo loo marayo iskaashi cusub oo dhexmara bulshooyinka iyo maal-gashadeyaasha, 1,160 unug oo guryo la awoodi karo ayaa dhowaan la dhisay iyo 1,677 unug ayaa lagu keydiyey Magaalada Mataanaha ah ee 2018. Gaar ahaan MN, tiradaasi waxay ahayd 1,027 cutub oo dhisme cusub iyo 410 unug oo badbaadinta (bogagga 6- 7).
Tallaabooyinka Guriyeynta MN ee 2012-2018 waa kii ugu dambeeyay warbixino taxane ah oo sanadlaha ah oo ay soo saarto haya'dda guryaha ee loo yaqaan 'HousingLink' oo lagu soo saaray magaca 'McKnight Foundation'. Warbixintu waxay muujineysaa sawirka guryaha kirada ah ee la awoodi karo oo leh lambarro si joogto ah u muujinaya suuq dhib badan, oo leh guri hooseeya, sare u kaca iyo kirooyinka aan la awoodi karin, iyo caqabadaha hor yaalla dhisidda guryo cusub oo ay dowladdu maalgeliso. Sida laga soo xigtay warbixintii ugu dambaysay ee Hawlaha Guryeynta MN, suuqa guryaha ballaadhan ayaa horumariyey bilihii la soo dhaafay waxayna u baahan doontaa inay horumariso 300,000 unugyo dheeri ah marka la gaaro 2030 si loo daboolo baahiyaha (oo ay ku jiraan 10,000 cutub oo dheeri ah sanadkii 5ta sano ee soo socota heerarka wax soo saarka ee hadda).
Marka la eego in gobolkeenu ku tiirsan yahay guryo deggan oo la awoodi karo oo la heli karo, warbixintu waxay cabirtaa caafimaadka qaraabada ah ee juqraafi ahaan guud ahaan gobolka Minnesota iyadoo la eegayo kirooyinka suuqa gaarka loo leeyahay, saadka guryaha ay dawladdu kaabayaan, iyo sidoo kale maalgelinta duruufaha guryeynta la awoodi karo. Warbixinta guddiga hawleedku wuxuu ku baaqayaa ficillo heer degmo, gobol, iyo heer gobol ah si loo naaquso caqabadaha iyo qarashyada horumarka, la kordhiyo maalgashiga guryaha la awoodi karo, lana kicinayo hal-abuurka iyo xallinta guryaha ee lagu awoodi karo in wax looga qabto fashilka suuqa.
Tallaabooyinka Guryaha ee MN 2012-2018
Hagaajinta Guriyeynta MN 2012-2017
Hagaajinta Guriyeynta MN 2012-2016
Qiyaasaha MN-ka ee 2012-2015